Date: 16 janvier 2018 - 08:04
Salama daholo,misy orinasa nandefasako demande dia mila mahay anzany EAM zany hono le poste. Iza no mety mba mahafatatra oe fanaovana inona izy io ary aiza no mety ahitana le logiciel hianarana aty atrano. Na koa hoe ra misy afaka mapanao cours accelere du genre 2 semaines de tena raisina antanandroa.
Misaotra amzay vonona hanampy.
Re: Logiciel EAM
Date: 16 janvier 2018 - 16:11
omeo num de mifampiresak,
LN na ERP io sopapa kel de jereo am google fa met hainao avy atrany